निर्वाचन बिरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा सीके राउत पक्राउ (२०७४ म‌सिर २१, विहीवार)
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन का संयोजक डा. सीके राउतलाई डेराबाट पक्राउ परेका छ्न् । निर्वाचन बिरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
आज बिहान १० बजे तिर डा. राउतको डेराबाट उनको मोबाइल फोन, ल्यापटोप जफत गरी उनलाई गिरफ्तार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । नयाँपत्रीकामा समाचार छ ।